रोचक विविध – Nepali online news portal
काठमाडौं (पास)– मानिसको जीवनमा अनेकौँ बाधाहरु आउने गर्छ । त्यहि बाधाहरुको बीचबाट मानिसको टर्निङ्ग प्वान्टको सुरुवात हुन्छ । हामीले जीवनलाई परिस्थिति अनुरुप फरक फरक तरिकाले परिभाषित गर्छौैँ । त्यस्तै यहाँ जीवनसंग सम्बन्धित प्रसिद्ध १०० भनाइहरु समावेश गरिएको छ । यसबाट तपाईँको जीवन जीउने तरिकामा परिवर्तन ल्याउनसक्छ र उत्प्रेरणा मिल्नेछ । १. ‘रिस’को उल्टो ‘सरी’ पनि […]
१३ माघ २०७८, बिहीबार १२:४० January 27, 2022 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
बीबीसी । अमेरिकाको एक व्यक्तिमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको छ । आनुवंशिक रुपमा परिमार्जन गरिएको सुँगुरको मुटु अमेरिकाका डेविड बेनेट नाम गरेका व्यक्तिमा सफल प्रत्यारोपण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । सुगुँरको मुटु प्रत्यारोपण गरेर ती व्यक्ति संसारमा सुगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो व्यक्ति बनेको छन् । चिकित्सकअनुसार बाल्टिमोरमा ७ घण्टा लगाएर ती व्यक्तिको सफल शैल्यक्रिया […]
२७ पुस २०७८, मंगलवार १३:२५ January 11, 2022 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
झापा / वि.सं. २०२८ को अन्त्यतिर भारतको पश्चिम बङ्गालको नक्सलवाडीमा कानू सन्याल र चारू मजुमदारको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका थिए । त्यसबाट प्रभावित भएर नेपाली कम्युनिष्टहरूद्वारा नेपालको झापा जिल्लामापनि ’वर्गशत्रु समाप्त पार्ने अभियान’ चलाईयो । यो काण्डमा कम्युनिष्टहरूले सामन्त आरोप लगाएर केही सर्वसाधारण नागरिकको त्यसताका हत्या गरे । सर्वसाधरण नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा […]
२४ पुस २०७८, शनिबार २१:४६ January 8, 2022 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
काठमाडौं। दुवईको आकर्षणको मुख्य केन्द्र बनेको बुर्ज खलिफालाई टक्कर दिने संसारकै अर्को भवन मलेसियामा बनेको छ । बुर्ज खलिफालाई चुनौति दिने अर्को भवन तथा विश्वमा अझै कतैपनि बनेको छैन । तर बुर्ज खलिफापछि संसारको दोश्रो अग्लो भवन हुनका लागि चाहीँ तिव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसैक्रममा संसारको दोश्रो अग्लो भवन मलेसियामा बनेको छ । हाल […]
२३ पुस २०७८, शुक्रबार २२:२० January 7, 2022 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
एजेन्सी । आइरल्याण्डमा कोठा भाडाका लागि अनौठो विज्ञापन जारी गरिएको छ । उक्त विज्ञापनमा घरधनिले कोठा भाडाको सट्टामा यौनसम्पर्क गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले विज्ञापनमा ‘सेक्स फर रेन्ट’ पनि लेखिएको छ । यो सुविधा युवतीहरुका लागि मात्र दिइने विज्ञापनमा उल्लेख छ । आइरल्याण्डमा भाडामा बस्न घर वा कोठा पाउन मुश्किल छ । भाडामा पनि […]
२३ पुस २०७८, शुक्रबार २१:४८ January 7, 2022 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
काठमाडौं । विश्वको यस्तो एउटा देशका राजा छन्, जो सम्बन्ध विच्छेद नै नगरी वर्षै पिच्छे एउटा विवाह गर्छन् । देशका राजामाथि कयौँ जिम्मेवारी हुुन्छन् जुन पालना गर्नैपर्छ । राजाले आफ्ना सन्तान मात्रै होइन सम्पूर्ण जनताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उनले आफ्ना जनताको सबै दुुःख पीडा बुुझ्नुु पर्छ । विश्वका धेरैजसो देशमा राजतन्त्र विस्तारै समाप्त हुँदै छ […]
१५ पुस २०७८, बिहीबार १८:४७ December 30, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
काठमाडौं । अहिले देशभरि सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको र उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा हल्का हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बुधवार दिउँसो पनि सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद्‌ गङ्गा नगरकोटीले बताइन्। त्यसैगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम […]
१४ पुस २०७८, बुधबार १३:४५ December 29, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
हामी जस्तो खान्छौं, त्यस्तै बन्छौं । किनभने हामीले खाएको खानेकुराबाट नै हाम्रो शरीरका कोषहरु निर्माण हुने हो । खानेकुरा खाइसकेपछि हाम्रो पाचन यन्त्रले कसरी काम गर्छ ? पाचनको प्रक्रिया मुखबाट सुरु हुन्छ, जहाँ दाँतले भोजनलाई पिसेर ¥यालमा रहेका इन्जाइम्सले यसलाई टुक्र्याउन सुरु गर्छ । पाचनतन्त्रले खानेकुरालाई सानो सानो टुक्रामा, जस्तै ग्लुकोज, एमिनो एसिड, फ्याटी एसिडमा […]
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार २०:१६ July 27, 2021 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)